Ndingakwanisa kuvakira vakadzi vane pamuviri here?
Vakadzi vakawanda vane pamuviri, zvikuru avo avo vanoda basa rekusungirirwa, vanoda kusungira dowry yevana remangwana. Kutanga nguva yavanofarira, vakadzi vazhinji vanogona kusangana nemashoko pamusoro pekurambidzwa kwekubata panguva yekuzvitakura.
Ndinokwanisa here kubatana panguva yekuzvitakura? Kuzivikanwa panguva yekuzvitakura hakubvumirwi. Kubva pane imwe nzvimbo yezvechiremba, hapana zvinopesana nezvinofadza izvi kune mukadzi ane pamuviri.
Sei vakadzi vasina pamuviri vasingakwanisi kubatana?
Pane chivimbo chokuti vakadzi vane pamuviri havagoni kubatana. Kana ukabatana panguva yekuzvitakura, mwana paanenge aberekwa anogona kuvhara tambo kana kuti pachave nejecha pamutilical . Kutenda uku hakuna kufambidzana nedambudziko rakapiwa mune zvehutano uye ndeyezvitendero. Kubva pane zvesayenzi zvemaonero, hakuna humwe uchapupu hwechokwadi ichi. Kutenda kuti hazvibviri kuwanana vakadzi vane pamuviri kunobva pakuziva kuti mumazuva ekare vakabatanidzwa mune imwe nzvimbo yekuputika kwemhepo, vagere kwenguva yakareba munzvimbo isina kunetsa.
Ndingaita here kuti vatadzi vane pamuviri vechechet?
Iwe unogona kubatana panguva yekuzvitakura nekugadzira nheyo kana crochet. Crocheting inofadza uye inofadza. Izvi zvinokurudzira amai vanotarisira. Kubva pakufunga kwepfungwa, kugadzirisa zvinhu zvemucheche anozvigadzirira kuti ave amai vemazuva ano, nokuti anoratidza kutanga kunetseka kwechecheche.
Ndinokwanisa here kubatana nemasero?
Kuziva vakadzi vane pamuviri vane mazano emagetsi ndeimwe yezvinhu zvakakurumbira munguva iyi yehupenyu. Kuziva nheyo dzevakadzi vane pamuviri hazvipindirani. Kutora kutakurirwa nekugunzva, amai vanouya vanokwanisa kugadzirira mwana wezvinhu zvakawanda zvakakosha, zvakadai sehembe, mabheji, masokisi, mabhoti nezvimwe zvinhu zvakawanda. Kwaziwa kazhinji kunoshandisa zvinhu zvepanyama, izvo zvichaita kuti mwana anouya anzwe akasununguka. Iwe unogona kushandisa iya yakagadzirwa nemvere dzemakwai, kamba, rineni. Mwana wacho anokura zvakanyanya, saka zviri nani kumusunga zvinhu mumasikisi akawanda.
Kuziva mitemo yekubata
Ichokwadi kuti iwe unogona kubatanidza vakadzi vane pamuviri, pasinei nematenda ose. Asi, kufarira zvikuru basa iri rinobatsira, yeuka kuti unoda kubatana:
mune nzvimbo yakanaka yemhepo;
zvakakosha kuti usagara munzvimbo isina kunetsa, kuchinja;
pasi petsoka, iwe unogona kuisa mutsamiro, kuvamutsa, kuitira kuti ropa rirege kuparara paanogara mune imwe nzvimbo.
Zvimwe zvinokuvaraidza zvako nekufamba mumhepo itsva. Knit kusvikira kusvika kuneta. Usatora kumira sebasa rinomanikidzira rinofanira kuitwa. Ziva nokuda kwekunakidza kwako uye kumwana wako.
Ndinogona kushambidza pamuviri here?
Ultrasound ye fetus mavhiki 12
Embryo vhiki 5
Chipiri chechitatu chekuzvitakura
Zvinokwanisika here kune shrimps dzakatakura?
Apricots panguva yekuzvitakura
Kubata pamuviri uye kuberekwa - zvinhu
Zvinokwanisika here kuva nepamuviri mubhagi?
Maitiro ekurapa mahemorrhoids mushure mekubereka mwana?
Pancreatin mukudzivirira: zvinoita here kana kwete?
Zvepabonde pamwedzi 7 kubva pamuviri
Bant pane imwe nzvimbo kubva kuchipatara
Mavhiki 27 ekuzvitakura - chii chinoitika kumwana namai?
Sporry - kushanda kusagadzikana
Nefroptosis yechipiri chechipiri
Kukurudzirwa kwehuvhu neKlostilbegitom
Nzira yekudzorera tambo dzezwi?
Actinidia - kudyara uye kutarisira
Nzira yekusunungura mukaka wamazamu?
Caloric zvakagadzirwa nekofi pasina shuga
Nguva ipi yekuunganidza Jerusarema artichoke?
Bag shopper - zvinorevei, zvinotaridzika sei uye zvingaipfekedzei?
Kurema uye kuyerwa kweEmily Rataskovski
Dhipatimendi rehutano hwevakadzi vane pamuviri
Eckers - marudzi uye marudzi ezvivako
Muenzi wacho anobatsira oncologist nokukomba maeheddi avo misoro
Kudyara utamatisi muvhu rakazaruka - maitiro ekukura
Nhamba gumi nemasere dzakakurumbira mumapuranga munhoroondo
Mifananidzo yemapurisa yekamuri yemwana yemukomana
Kupfuura kushambidza maziso nekutinhira kweguruva?
Zvinyorwa pamusoro pekumhanya
Bozbash - mapeji okutanga emidziyo yeCaucasian dish
Amber Hurd anogona kuisa Johnny Depp kumashure
Fur coat pamatanda akavakirwa
Zvikwata zvevakadzi zvegore-autumn